Dubai - Ihe niile dị ukwuu na obere - njem nke Wendy Louise Nog na UAE
Mụ na nwa m nwanyị nọdụrụ na mbara èzí ebe a na-eme kafe mara ọnụ ya Achịcha anụcha na ebe ịta nri ọ bụla dị na egwurugwu ma legide anya n'akụkụ ọdọ mmiri a na-eme ka ọ dị mma. N'okpuru ebe a. Anyi no n’agba nke asaa nke cafes Ebe akara ahụ bụ nnukwu ụlọ ahịa Dubai. Ka anyị nọdụrụ ala ma kuo ume ikuku, ma jua anya na ntakịrị oroma mmanụ nke oke ikuku nke dị anya nyere ụlọ ndị gbara ya gburugburu. Ke akpa ini ke urua iba, obi ruru anyị niile ala.
Njem anyị sitere na California ịga leta ezinụlọ na Kolkata mekwara ka ọ bụrụ nke a oke emegide ị na-enweta mgbe anyị na-agagharị ebe ọ bụla na India, anyị erutela Dubai nke ọma. Abụ nwanyị ịbụ onye ya na otu nwatakịrị nwanyị ji bịa chọrọ ịmụrụ anya nke na-agwụ ike. Obi dị anyị ụtọ na anyị rutere Dubai, n'ezie, anyị ahụla Burj Kalifa ka anyị na-agbada.
Anyị were ụgbọ okporo ígwè dị ọcha nke si Dubai ọdụ ụgbọelu, wepụtara na nnukwu nnukwu ụgbọ oloko na-akwụsị. Jee ije n'ụzọ ụzọ na-anaghị agwụ agwụ nke akụkụ ndị na-agafe agafe rue mgbe anyị mechara ruo ebe anyị na-aga wee chọpụta otu ebe ị ga-anọ nọrọ, zuru ike, ma weghara ebe obibi ọhụrụ a. Ka anyị nọdụrụ n’anyanwụ na-ege egwu gburugburu ambi gbara anyị gburugburu. Enwere m mmetụta na nchegbu niile, nchekasị nke njem, nchegbu banyere ihe ọ bụla, na-agbaze kpamkpam. Anyị nọrọ ọdụ ebe ahụ na-eju anya, na-ezukọta ọnụ na mmetụta ahụ nwere ike ịnwe naanị na Dubai.
Dubai aghọwo ọghọm njem nleta dị egwu!
Ebumnuche m maka ịga n’obodo a dị ịtụnanya bụ iji jikọọ onye ahịa nke websaịtị m, Celebrity Persian Chef Ariana Bundy, onye na-emepe ụlọ oriri na ọ restaurantụ Persụ ndị Peshia, “Kitchen Ariana nke Persia” na Royal Atlantis Hotel & obibi ndị dị ịtụnanya. A na-enye nri ya ndị Peshia na rose, saffron, pistachios, ọ ga-enwekwa ndepụta dị ịtụnanya maka usoro nri oge ochie. Ọ na - emezigharị ụlọ obibi dị afọ 300 na a Iche iche iji jee ozi dị ka ụlọ ebe a na-esi esi nri na ebe ị na-aga.
Akụkọ ya bụ otu nke gosipụtara akụkọ banyere Dubai. Ọ bụ ebe ị pụrụ nrọ nrọ, ma mee ka nrọ ndị ahụ mezuo. Ọ bụ ebe eji egwuri egwu maka ndị nrụpụta ụlọ na ndị mmepe, ndị chefs na ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe na ndị njem, ma ihe niile ị nwere ike iche na ọ ga-ekwe omume, gụnyere imepụta ụwa nke agwaetiti na agwaetiti. A na-asọpụrụ Bright Future ka ya na ya soro gaa njem a, yana dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntanetị na-ahụ maka ngwa nri na-ahụ maka nri, nke a bụ nleta pụrụ iche dị egwu.
Anyị nwere ike iburu ngwa ngwa über N’ebe niile, ndị ọkwọ ụgbọ ala anyị ọ bụla nwere obi ọma, nwee omume enyi, ma nwee oghere ịkọrọ ndị ha na ezinụlọ. Obi bịara dị anyị mma kpamkpam. Dị ka ọtụtụ ndị bi na Dubai, ndị ọkwọ ụgbọala ahụ niile si ebe ọzọ, nke dị ka ụlọ anyị bi na California.
Onye ọbịa anyi nwere obi oma nyere anyi nleta nke gburugburu ebe anyị bi, ọ bụụrụ nnọọ obi mmụọ ịbịakwute ibe ọzọ na ụyọkọ kpakpando 100 ọzọ. Na owuwu ulo ohuru na-eme ebe obula, na ọ bụ ihe ọ excitingụ ịhụ ma chee etu ha ga-adị mgbe emechara ha dabere na akụkụ agaghị ekwe omume nke yiri ka ọ na-apụta n'okpuru cranes.
Diner ke ọmarịcha kpakpando ise
Anyị riri nri na Jumeirah Al Qasr, ebe kpakpando ise gbara, wee nọdụ na palọ na-elele ọwa ndị nwere nkwụ. Ihe owuwu a dum bụ ezigbo okwute na okwute. Nri ahụ dị ụtọ na-atọ ụtọ nke ukwuu, na mmanya ahụ amachaghị, nke na-apụ n'anya ebube n'otu oge ahụ.
Ihe ọdịnihu ga-abụ A ga-eme World Expo na Dubai na 2020, na owuwu amalitelarị, ebe mba ndị na-ewu ihe ngosi dị ịtụnanya gbasara ụlọ ọrụ ihe okike ha kacha ewu ewu Ọ na-achọ ịnwale nkọwa niile nke oge anyị ịgagharị na obodo Dubai dị ịtụnanya, mana ọ bụ ihe ọchị karịa ịchọpụta ya n'onwe gị. Anyị ga na-alaghachi, anyị enweghị ike ichere nụrụ ụtọ ice cream na-enye saffron Ariana ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-echekwa mbara nnu nnu nke dị n'akụkụ Ọsọ Osimiri Peshia.
Njikọ Iji Weebụ Ariana na Pọpụfoliyo Anyị:
Wendy Louise Nog Onye guzobere, Ntube ihe ntanetị, Future BrightPhone: 415-275-0970
Adreesị: 100 Shoreline Highway, Building B, Suite 100
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi na ozi na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.